PSALIM 7 midika hoe andininy isaky ny andalana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka PSALM 7 izay midika hoe andalana
Raha mbola eo am-pandinihana io isika Psalms, anio, hojerentsika ny bokin'ny Salamo 7 izay midika hoe andalan-tsoratra. Nasehon'ilay andinin-tsoratra masina fa nosoratana ny salamo, nefa novonoin'i Davida tamin'ny fomba feno habibiana i “Kush Benjamita,” iray amin'ny havan'i Saoly. Matoky i Davida noho ny tsy nanan-tsiny (andininy 3-5) ary ny fahatokisana ny famalian'Andriamanitra ny Cush mendrika indrindra (andininy 6-17).
Ity salamo ity dia fitalahoana ny hanamarinan'Andriamanitra noho ny fiampangana sy ny ataon'ilay mpampahory. Ny fahatokisan'i Davida ny mpitsara'Andriamanitra no ambadika ao amin'ny Salamo faha-7 (ampitahao amin'i Abrahama 18:25). Rehefa miantehitra bebe kokoa hatrany azy io fahamarinana io, dia hiala avy amin'ny tebiteby be loatra izy ka ho tonga antoka toky. Ity salamo ity dia nanaraka an'i Davida tamin'ny alàlan'ny dingana 3 nanam-pandrenesana ho valin'ireo fanendrikendrehana diso izay nenjehina taminy
Salamo 7, dikan'ny hoe fehezan-teny
Andininy 1: Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no itokiako: vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy, ka afaho.
Ny fanantenako sy ny fahatokisako rehetra dia amin'ny fankasitrahanao sy ny fahatokianao hahatanteraka ny fampanantenanao tamiko. Rehefa nanafika an'i Kosy Benjamina i Davida, dia afaka matoky azy Andriamanitra. Ny fanampiana hafa rehetra dia tsy nisy, fa tsy mila fanampiana fanampiny. Tsy misy fantatra momba ny Kosy, fa tamin'ny fikomian'i Absaloma dia nipoitra fa i Benjamina, fokon'i Saoly, dia nitana fahavalo mangidy nataon'i Davida. Indraindray ny herin 'Andriamanitra dia miharihary amin'ny fanampiana amin'ny fitsapana. Indraindray dia hita miharihary amin'ny fanafahana antsika amin'ny fitsapana. Resy lahatra i Davida fa te hanafaka azy amin'ity fitsapana ity Andriamanitra.
Verse 2: Fandrao mamiravira ny fanahiko toy ny liona Izy, ka mamiravira azy, nefa tsy misy mamonjy. ”
Mamporisory ny fanahiko toy ny liona ”: Matetika ny fahavalon'ny mpanao salamo dia sarin'ireo biby masiaka sy manafika, miaraka amin'ny" mpanjakan'ny biby "matetika, ny Salamo 10: 9; 17:12; 22:13, 16, 21). Nino i David fa hisy akony lehibe raha tsy voavonjy amin'ireo fahavalo mitovy amin'ny liona izy. Izany fahatakarana izany dia nanam-po an'i David tamim-bavaka. Mamela ny fotoan-tsarotra Andriamanitra indraindray hamoha azy ireo maika.
Andininy 3: Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eo an-tanako;
Ny heloka nataon'i Saoly sy ny mpiara-miasa taminy tamin'i Davida, ary natao ampahibemaso izany ka fantatry ny rehetra. Ary noho izany dia tsy ilaina, indrindra indrindra ny hilazana azy io. Tamin'ireo teny ireo, i David dia tsy nitaky fahalavorariana tsy misy ota. Fa nolaviny fotsiny ny foto-kevitra momba ny fitovian-kevitra eo amin'ny tenany sy ny fahavalony. Na dia nilaza ny tenany aza angamba i David, dia tsy mety izany ary ny teniny dia tsy midika hoe tonga lafatra izy, fa tsy meloka noho ny heloka nataony.
Andininy 4 sy 5: Raha tàhiny aho namaly ratsy izay nihavana tamiko, na nandroba ny fahavaloko tsy ahoan-tsy ahoana; Aoka ny fahavalo hanenjika ahy ka hahatratra ahy; Eny, aoka izy hanitsakitsaka ny aiko amin'ny tany ary hampandry ny voninahitro amin'ny vovoka. Selah.
Natao ho an'i Saoly izany, fony izy nihavana sy sariaka tamin'i Davida. Voampanga ho nanao tsinontsinona an'i Saoly i Davida talohan'ny nandraisan'ny fahavalony azy. Fantatr'i Davida fa mangetaheta ny fahareseny ny fahavalony. Natoky tanteraka ny fahamarinany izy raha oharina amin'ny fahavalony ary vonona hatolotra ny faniriany izy ireo raha marina. Voalazan'i Davida eto ity, andramo aho Tompo ary jereo raha nanao ratsy aho. Hoy koa izy, raha nanao ratsy, dia mendrika ho ringana aho. Fantatr'i Davida fa tsy nanao ratsy izy, ary izany no niampangana azy.
Andininy 6: Mitsangàna, Jehovah ô, amin'ny fahaviniranao, misandrata, noho ny fahatezeran'ny fahavaloko, ary mifohaza ho amin'ny fitsarana izay nandidianao..
Nino i Davida fa Andriamanitra dia manana ny filan'ny olombelona tahaka ny hatezerana. Nino koa i Davida fa ny fitiavany no azy; nino izy fa Andriamanitra dia ho tezitra na ho tezitra ho azy fa tsy hanohitra azy. Fahadisoana ny mino fa tsy misy fiadanam-po Andriamanitra. Satria Izy dia Andriamanitra, afaka milaza isika fa ireo filana ireo dia tsy mitovy amin'ny olombelona mitovy aminy; kanefa toa tena toa azy ireo ihany izy ireo. Tsy mangatsiaka, lavitra ary tsy tsara fanahy Andriamanitra.
Andininy 7: Dia toy izany no hanodidinan'ny fiangonan'ny firenena anao, noho izany dia miverena any ambony.
Ny vavaka nataon'i Davida ho fiarovana sy fanamarinana dia tsy tia tena loatra. Fantany fa nifandray tamin'ny fiadanan'ny vahoakan'Andriamanitra ny fiafarany. Izany dia tamin'ny fomba lehibe indrindra ho an'izy ireo, ho an'ny fiangonana.
Andininy 8: Jehovah hitsara ny firenena; Tsarao aho, Jehovah ô, araka ny fahamarinako. Ary araka ny tsy fivadiko ao anatiko.
Izany no toe-tsaina niaro an'i Davida tsy hihevi-tena. Nanasa ny didim-pitsaran'Andriamanitra sy nanitsy izy. Koa nangataka ny fitahian'Andriamanitra araka ny fahamarinako sy ny fahatokisako ao anatiko i Davida. Raha ny marina, dia nivavaka izy, Tompo ô, fa marim-pototra eo imasonao aho, ka tahio sy arovy amin'ny fahavaloko. Rehefa naniry ny fahamarinana i David, dia tsy ny faniriany farany sy tonga lafatra no tadiaviny eo anatrehan'Andriamanitra; izy dia nitady ny rariny eran'izao tontolo izao, ny fahamarinana teo aminy sy ny mpiampanga diso azy.
Andininy 9: Enga anie ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy, fa ampitoero ny marina; Fa Andriamanitra marina no mandinika ny fo sy ny saina.
Mampiharihary kokoa ny fon'ny vavaka nataon'i Davida izany. Tsy vitan'izay fa nangataka ny mba hanamarina an'Andriamanitra izy. Tsy nivavaka ho an'Andriamanitra manokana i Davida; Nivavaka izy mba ho marina Andriamanitra, ary nikaroka ny fony manokana izy hanampy azy hametraka azy eo anatrehan'Andriamanitra. Toa nivavaka teto i David mihoatra ny zavatra ilainy manokana. “Betsaka ny fahitana eto, manambara ny ahiahy momba ny fahamarinana eran-tany izay antony nahatonga ny fangatahan'i Davida famelan-keloka.
Andininy 10: Andriamanitra miaro ahy, Izay mamonjy ny mahitsy fo.
Fantatr'i Davida fa misy fahasimbana lehibe eo anatrehan'ny fahavalony ary tsy maintsy miantehitra amin'ny fiarovan'Andriamanitra izy. Tamin'ny fahatokiany an'Andriamanitra, dia "nanary fanendrikendrehana, toy ny nataon'i Paoly ilay menarana; amin'ny fihomehezana masina dia fihomehezany izy.
Andininy 11: Mpitsara marina Andriamanitra, ary tezitra amin'ny ratsy fanahy Andriamanitra.
Ny fiangavian’i Davida mialoha ny fizahan’Andriamanitra ny olona (Salamo 7: 9) dia nahatonga azy hieritreritra ny fahamarinan’Andriamanitra. Nambarany io fitsipika fototra io: mpitsara marina Andriamanitra. Fahamarinana matetika sy mampidi-doza no ekena momba an'Andriamanitra. Maro no manantena fa hijoro eo anoloan Andriamanitra be fitiavana izy ireo, famindram-po lehibe, hafanana lehibe ary fahalalahan-tanana lehibe. Tsy noheverin'izy ireo mihitsy fa hijoro eo anoloan'Andrimanitra iray tsy miangatra izy ireo ary tsy afaka miraharaha ny heloky ny ota.
Andininy 12: Hatseniny ny sabany; Niondrika izy ary efa niomana.
I Davida eto dia nihevitra ny fahavonon'Andriamanitra hitsara ny mpanota. Hitan'i Davida fa voatsindrina ny sabatra ary niondrika izy. Miomana hitsara Andriamanitra, ny mpanota tsy tokony hihevitra fa hanemotra ny fitsarany Andriamanitra. Rehefa mamindra ny fitsarana amin'ny famindram-po Andriamanitra dia maro ny olona manao fahadisoana lehibe. Mihevitra izy ireo fa izany famindram-po izany dia midika fa tsy miraharaha ny fahamarinana Andriamanitra.
Andininy 13: Manomana fitaovana ho an'ny tenany ihany koa Izy; Nataony zary mirehitra afo ny zana-tsipìkany.
Ity sary mahatsikaiky mahery vaika ity dia mampita ny hamafin'ny didim-pitsaran'Andriamanitra, manantena fa hanome antony hafa hibebaka izy. Mety ho miadana ny hatezeran’Andriamanitra, fa azo antoka foana.
Andininy 14: Indro ny ratsy fanahy dia mamoaka heloka; Eny, miteraka fahoriana sy mamoaka lainga izy;.
Ity fanambarana izay toa miharihary ity dia manan-danja. Mampiseho izany fa ny fo ratsy hampiseho amin'ny tenany amin'ny asa ratsy. Ireo fanao ratsy ireo dia mety manana ny saron'ny fanajana fa kosa feno ny heloka. Manam-borona izy ka mamoaka lainga: Izany dia mampiseho ny loharanon'ny ota fa avy ao anatin'ny mpanota. Ny mpanota miteraka ary miteraka ota rehefa reny miteraka zaza avy ao anatiny.
Andininy 15 sy 16: Ary nanao lavaka izy ka nihady azy, dia latsaka tao an-kady izay nataony. Miverina amin'ny lohany ny fahantrany, ary hidina amin'ny satro-boninahiny ny lozabe.
Mampiseho fomba iray mahazatra ny fizarana an’Andriamanitra hanjaka izany. Matetika izy no mitondra loza mitovy amin'ny olon-dratsy izay nokasain'izy ireo ho an'ny olo-marina. “Marina Andriamanitra. Ny lalan'ny faharatsiana dia tsy afaka mivoatra. Izy io dia mamorona ny fandringanana azy. Ny lavaka nolavahana dia no fasan'ilay olona mikaroka azy. ” Hidina eo amin'ny satroboninahiny ny fanaovana an-keriny. Ohatra roa amin'ireto maro ao amin'ny Baiboly ireto dia ny fahatongavan'i Hamana, ny fahavalon'i Mordekay sy ny Jiosy (Estera 7: 7-10), ary ny fahavalon'i Daniela tao amin'ny lavaky ny liona (Daniela 6:24).
Andininy 17: Hidera an'i Jehovah araka ny fahamarinany aho ary hankalaza ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra.
Hendry i Davida ka nidera an'Andriamanitra araka ny fahamarinany fa tsy ny azy. Na dia nitalaho tamin'Andriamanitra tao amin'ity salamo ity aza i Davida mifototra amin'ny hatsaram-panahiny nampitahaina, tsy vavaka natao hivavahana samirery izany. Fantatr'i Davida ny tsy fitovian'ny fahamarinana sy ny havany mendri-piderana ary mendri-piderana. Namarana io salamo io i Davida, izay nanomboka teo amin'ny maizina amin'ny fiderana ambony indrindra. Afaka nidera izy satria nitondra ny foto-keviny tamin'Andriamanitra sy tamin'ny finoana, nandao azy tao.
Rahoviana no ilantsika io salamo io
Rehefa tsaraina isika dia tsaraina amin'ny namantsika, havantsika, na any am-piasana
Rehefa mampijaly ny olona manampahefana ambony na fahefana isika
Rehefa toa izany dia isika irery no miaina amin'ny antony tsara nefa tsy misy olona akaiky anay
Raha toa ny fahavalonay dia mety mihoatra noho isika ary tsy manan-kery hiady
Rehefa voatsindry ny herin'ny maizina isika
Ry Tompo Andriamanitra ô, ny fahatokisako anao dia anio, afaho amin'ny karazana fanenjehana sy fampahoriana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny fanafihana rehetra ataon'ireo mpanafika amin'ny fanendrena hanimba ny fiainako dia tsy mahazo fanambinana ianao, miparitaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Ankehitriny aho dia mamarana ny fisokafan-fantatra rehetra ary tsy fantatra amin'ny alàlan'ny fanomezana fidirana amin'ny fiainako amin'ny asan'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo ô, mitsangàna anio momba ny fiainako, manaova lalana ho ahy, tsy manam-petra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô ankehitriny amin'ny alàlan'ny herinao mavesatra, avelao ho tapitra ny fiainako sy ny fianakaviako ary ny hoaviko tsy hisy hatak'andro ny anaran'i Jesosy.
Tsy mandà ny latsaka any amin'izay lavaka fantatra sy tsy fantatra aho izay napetraky ny ratsy fanahy tamiko.
Izay nihady lavaka dia ho latsaka ao anatiny amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, amin'ny alàlan'ny herinao tsy azo resahina, mitodiha ny fisedrana rehetra sy ny olana eto amin'ny fiainako mba hijoro ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraPSALM 103 izay midika hoe andalana
Next lahatsoratraPSALM 16 izay midika hoe andalana
Torohevitra 30 momba ny fanafahana amin'ny fahababoana
Andinin-Baiboly 10 hivavahana rehefa very hevitra ianao
50 Mivavaka momba ny fatiantoka
Novambra 24, 2018
Fotoam-bavaka alohan'ny hatory ho an'ny ankizy